Ewezuga Ịkwụ Ụgwọ Nyefe Site na Google Analytics - Omume Semalt
Ọ dị mkpa iji soro usoro azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị rụọ ọrụ nke ọma. Ihe ntanetị nke ịntanetị na ịzụrụ bụ ihe dị mkpa nke ndị njikwa azụmahịa ga-elele anya bụ ndị bu n'obi ịkwalite ọrụ ọrụ ha site na iji ibe weebụ ma ọ bụ weebụsaịtị. Ilele isi iyi nke ịntanetị dị oké egwu n'ịchọpụta irè nke usoro mmefu ego. A ga-etinye ego ka ukwuu maka usoro ahịa ịntanetị nke na-eme ka ọ bụrụ na ị ga-enweta ego kachasị elu. Ihe ntanetị a na-ahụ maka ịntanetị na-agụnye ụzọ ziri ezi, usoro usoro, usoro ịkwụ ụgwọ, usoro ntinye akwụkwọ, na usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Michael Brown, Ọkachamara Onye Ọrụ Ntanetị Ndị Ahịa, kwuru na ịzụta ngwaahịa na ọrụ n'ịntanetị gụnyere usoro dị iche iche - unclaimed superannuation. Ọ bụ karịa ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke onye ahịa ịntanetị, na ịpị akara ngosi zụọ ma ọ bụ jikọọ, wee chere maka nnyefe nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ịzụta ịntanetị bụ usoro mgbagwoju anya nke gụnyere nlekota weebụsaịtị na ọtụtụ oge na sitere na isi mmalite dị iche iche. A ghaghị ime nchọpụta nke ọma na weebụsaịtị na nkọwa ịzụta tupu ịme mkpebi ikpeazụ.
Nkwụnye bụ ụzọ e si enye ego na ọwa ọ bụla. A na-enye akwụmụgwọ ahụ dabere na ọkwa nke ntụgharị ahịa. Ntọala nchịkọta nke Google Analytics na-enyefe 100% ego kaadị na-abụghị kpọmkwem. Ya mere, ndị ọrụ nwere ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ site na iji mbido akwụ ụgwọ na mbido..Otú ọ dị, mgbe ha na-agbalị imezu azụmahịa azụmaahịa na oge ikpeazụ, ha nwere ike chọpụta na usoro nchịkọta Google akọwapụtawo ire ere site na isi iyi ọzọ. N'ihi ya, usoro a bụ ihe nkwụsị maka onye na-eji ụgwọ Pay Per Click (PPC).
Ọ dị mkpa ka ndị nwe ụlọ ahịa ghọta mmekọrịta dị mgbagwoju anya dị n'etiti ahịa dị iche iche dị n'ịntanetị ma ọ bụ ịzụta ọwa. Ndị nwe ụlọ ahịa nwere ike ịchọta ihe niile na-esi na njirimara dị iche iche na-eme ihe site na iji nchịkọta Google Analytics. Enwere ike ịchọta atụmatụ kachasị mma site na ịhọrọ ụdị àgwà kachasị mma. Usoro nke ịhọrọ ụdị kachasị mma gụnyere usoro ntinye usoro: Ntụgharị - Nkwụnye - N'iji Nlereanya - Ngbanwe Ụdị. Ndị ọrụ PPC kwesịrị ịghọta na ọ dị nnọọ mfe iji gosi na ọ dị elu 50%, site na usoro AdWords, site na ịgbanwere àgwà ngosi ka onye ahụ na-arụ ọrụ ahịa dị elu.
Otu nsogbu dị mkpa nke ndị mmadụ na-ahụkarị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-egosi na ha na-ere ahịa na otu nchịkọta akụkọ. Ebe ntinye akwụkwọ bụ ụzọ nkwụnye ụgwọ dị ka egosipụtara na ihe atụ abụọ a: paypal.com/referral na checkout.sagepay.com/referral. Ihe ntinye ihe omuma ihe abuo bu nzagharia ederede n'ihi na ha na egosi na ahia adighi esi n'onu uzo. Otú ọ dị, netwọk data metụtara weebụsaịtị na ọnụ ụzọ ámá ahụ na-enyere usoro nchịkọta Google nyochaa ihe atụ ihe atụ abụọ ahụ dịka ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ. Enwere ike ịjụ nsogbu a site na iji usoro dị mfe. Onye nwe ụlọ ahịa kwesịrị iji usoro na-esonụ iji dozie nsogbu ọnụ ụzọ ámá ịkwụ ụgwọ: Admin - Ngwongwo - Ama Ama - Ntuziaka Ntuziaka. A ga-egosipụta nhọrọ maka ewepu ngalaba. Onye ọrụ ahụ ga-ahọrọ Ntinye Ntuziaka Ntugharị Ntuziaka ma họrọ mpaghara mpaghara gateway, dịka ọmụmaatụ, paypal.com. Mgbe nhọrọ nke mpaghara gateway, onye ọrụ kwesịrị ịchekwa mgbanwe ndị ahụ. Usoro a dị irè n'icheghị ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ. Nsonaazụ a choro site na usoro ahụ gụnyere inwe ndepụta ntinye ederede nke dị mfe ma ọ bụghị njigide.